Caddeyn: Muxuu salka ku hayaa khilaafka Puntland iyo ganacsatada Boosaaso? - Caasimada Online
Home Warar Caddeyn: Muxuu salka ku hayaa khilaafka Puntland iyo ganacsatada Boosaaso?
Caddeyn: Muxuu salka ku hayaa khilaafka Puntland iyo ganacsatada Boosaaso?
Boosaaso (Caasimadda Online) – Dekedda magaalada Boosaaso, ee xarunta gobolka Bari ayaa markale dib u xirantay, kadib markii Ganacsatada iyo dowladda Puntland ku heshiin waayeen lacagta canshuurta cusub ee la qaadayo.
Xirnaanshaha Dekedda hadda waxa uu ka dambeeyay iyadoo qiimo cusub ay soo saartay Wasaarada Dakadaha, kaasoo ay ku xusan tahay lacagta la canshuuri doono cuntooyinka, qalabka dhismaha iyo alaabaha kale ee kasoo daga.
Warqadda Tariifada lasoo saarey oo nuqul kamid ah ay heshay Caasimadda ayaa ku xusan in halkii Ton [907Kg Kiilo garaam]oo Bariis, Bur, Sonkor iyo Qamadi laga qaadi doono lacag dhan 0.80USD.